Murume anodzingwa pamubhedha negudo – Makuhwa.co.zw
MUKADZI wekuUzumba, kuMashonaland East, anoti akaparadzirwa imba yake kanokwana katatu apo varume vaimuroora vaiguma vamuramba nekuda kwekuti pane zvipuka zvakaita senyoka, gudo, mupurwa nembwa zvaimuita mukadzi pamadiro.
Mukadzi uyu, uyo watisingadure nezita rake rizere sezvo asingade kuzivikanwa, tichangomuti Marita uye pari zvino ava nemakore 50 okuberekwa.
Marita anoti kwemakore akawanda, mhuka idzi dzaishinha naye akasvinura asi dzimwe nguva zvaiitika ari kuhope. Akapedzisira ave kutozvifarira zvikaita kuti arambane nevarume vatatu.
“Dambudziko rangu raiva rakasiyana nezvandinombonzwa nevamwe vanhu. Handizive kuti kune mudzimai anokwanisa here kurara nemhuka sezvandaiitwa ini.
“Mhuka idzi dzaiuya imwe chete panguva dzakasiyana ndichitoona kana iri imbwa yotanga nekundinanzva. Chaishamisa ndechekuti ndaiona kusvika kwaiita mhuka idzi asi pakuzoenda kwadzo ndaisazviona,” anodaro.
Marita anoti imwe neimwe yemhuka idzi yaigona kuuya kuzomuita mukadzi katatu pazuva.
“Kana ndakasvinura ndichingoona mhuka idzi, ndaibva ndatopera simba dzondiita zvadzinoda pamadiro. Nyoka yaiuya ihombe zvikuru, yandingati yaiva yakareba mamita mashanu asi mhando yacho handiizive. Yaindiita mukadzi ichindisveta ropa nemvura nekusikarudzi yangu uye yaiita izvi yakandimonera muviri wose kubva muhuro, muchiuno nekumakumbo.
“Dzimwewo mhuka dzaitanga nekundinanzva muviri wose nekusikarudzi,” anodaro Marita.
Anoti kana imwe yemhuka idzi yave kuuya, aitanga kuona madzengerere obva aita seanoda kukotsira.
Nguva dzehusiku, kunyangwe murume wangu aripo, imwe yemhuka idzi ikasvika, murume wangu aibva angonyangarika zvekumushaya pamubhedha. Ndaizosara ndoitwa madiro nezvikara izvi iye asipo.
“Mhuka ikapedza neni, ndaisara ndichikotsira hope dzemadzikirira apo ndaizosvinura ndichiona murume avapo. Iye kumubvunza aiti hapana zvaaiona,” anodaro Marita.
Obvunzwa nekuda kwehukuru hwedzimwe mhuka dzaanoti dzaimushandisa, anoti dzimwe dzaigona kukura zvekuinzana nemunhu.
“Chainetsa ndechekuti kunyangwe madhoo emudzimbha mandaiva ainge akavharwa, mhuka idzi dzaingopinda ndichiona. Dzimwe nguva ndaiita zvekurota ndichitozosvinura mhuka yapedza neni.
“Dambudziko rakanga ravapo nderekuti ndakanga ndava kutofarira mhuka idzi pabonde kudarika murume zvikakonzera kuti ndisiyane nevarume vatatu, wandinaye ava wechina.”
Mukadzi uyu anoti akatobereka vana vatatu munguva yaaisangana nedambudziko iri.
“Ndinotenda murume wangu wandinaye izvozvi nekuti vamwe vatatu ava vakandiramba vamwe ndichirambawo ini.
‘‘Uyu wandinaye kunyangwe ndaimutaurira kuti ndinoshinha nemhuka, haana kundiramba, kusvika nanhasi tiri tose,” anodaro Marita.
Mudzimai uyu anoti ari kubatsirwa padambudziko iri kuchechi yeGoodness and Mercy Ministries iyo inotungamirirwa naProphet Tapiwa Freddy (33).
Kune vangade kubatsira Marita vanokwanisa kuridza nhare dzinoti 0712 528 094.
Prophet Freddy vanotsinhira nyaya iyi vachiti: “Dambudziko iri ndere maspiritual husbands (varume vemumweya) kana spiritual wives. Zvinouya nepakasiyana uye zvakapfeka ingava mitumbi yevanhu kana mhuka sezvaitika kuna amai ava.
“Kazhinji unoita zvekurota zvisinei kuti kashoma kutoona mhuka kana munhu achiuya wakasvinura.
Related Topics:MUKADZI wekuUzumba